(Igumbi Lokuhlala) I-TaichungCity Old House Eduze neMakethe, i-TaichungCity New Village, i-Green Light Project, i-Qianmei Calligraphy Greenway Business District - I-Airbnb
(Igumbi Lokuhlala) I-TaichungCity Old House Eduze neMakethe, i-TaichungCity New Village, i-Green Light Project, i-Qianmei Calligraphy Greenway Business District
246 okushiwo abanye
West District, Taichung City, I-Taiwan
I-ikhaya ephelele ibungazwe ngu-尷尬
U-尷尬 uthole izilinganiso zezinkanyezi ezingu-5 ezivela ku-90% wezivakashi zakamuva.
Kukhona ingqikithi yamagumbi okugezela angasese, 302, 303, amakamelo amane ongakhetha kuwo ~ "Wonke amagumbi okugezela angasese, ungakhathazeki"
Uma igcwele, ungahlola ukuthi yiliphi ikamelo elisatholakala noma ungibuze ~
I-Impera inkulu. Kukhona i-balcony esitezi sesibili.
I-Indonesia yiyo kuphela engenayo i-balcony > <
thereon 303 inkulu kancane kuno-302
Kodwa kukhona ama-balcony ~ Zombili zinhle kakhulu
~ “I-air conditioning iyashesha kakhulu igolide elikhulu!!!!Kodwa kusekuhle!!! Uma wesaba ngempela ukushisa, sicela ucabangele lokho. ”
"Siyindawo yokuhlala, amashidi awamhlophe njengehhotela, anemibalabala, kunamabala afiphele noma acocekile nsuku zonke, kodwa futhi siyizimboni futhi asihleli ukuwashintsha uma nje enemibala, ngokuyinhloko ihlanzekile futhi icocekile, sicela ungasebenzisi umqondo wehhotela ukuhlala endaweni yokuhlala"
Kukhona isitolo esilula se-FamilyMart phansi, eduze nemakethe ephakeme, iMakethe yase-China yaseMelika, kanye ne-parkway engokwesiko nezobuciko yase-Taichung, emhlanganweni oseduze wamasiko nobuciko, ukuhlola i-New Village, kanye ne-Green Light Plan akukude, vele uhambe.
:,,, i-WiFi,,,,,, (,)
Siyakwamukela endaweni yokuhlala yase-Taichung enobuntu kakhulu yasezimbonini ukuze ujabulele impilo enhle yasendaweni.
Amakamelo mahle, anethezekile, ahlanzekile futhi
acocekile Ikamelo elizimele, alihlanganyelwa nanoma ubani.
Ungathintana nomnikazi wendawo ukuze nixoxe kabanzi uma nidinga ukukhava ibhilidi nezinye izinto ezisetshenziswayo.Sinezindlu ezine sezizonke.
Indawo yethu iseduze neMakethe yaseTaichung Shang, iMakethe yaseHuamei, kanye noZhongming South Road. Kunezindawo zokupaka izimoto, iziteshi zamabhasi, izitolo ezilula, impilo nezokuhamba kulula kakhulu, futhi ungajabulela imakethe yokuthenga yemfashini edumile nazo zonke izinhlobo ezishibhile. amanani. Ungadla okumnandi.
Indlu ehlukanisiwe elungiswe kabusha yesitayela sezimboni enamafasitela amabili amakhulu asuka phansi kuya ophahleni kanye novulande abakhulu abanokukhanya kwemvelo. Kungakhathaliseki ukuthi indawo yomphakathi noma ingaphakathi legumbi, ngeke udumale.
Amakamelo ezivakashi mahle futhi anethezekile, ahlanzekile futhi ahlelekile. Angamagumbi azimele anamagumbi okugeza ahlukene omile namanzi, futhi ngeke abelwe noma ubani. Izisebenzi eziphezulu zezinkanyezi ezinhlanu zinakekela izindaba zendlu isikhathi esigcwele, zihlanzekile futhi zinethezekile.
I-Taichung inhloko-dolobha yesiko. Ungajabulela izinhlobo ezahlukene zamasiko endaweni eseduze. Ayikho indlela umnyuziyamu wesayensi yemvelo egxile emibonweni yesayensi, iNational Art Museum yesipiliyoni sobuhle, i-Qin Art Museum ehlala ishintsha neyamanje. izenzakalo, kanye nokugqugquzela entsha yezempi isiko emzaneni. i Audit Village, kanye Civic Square nalapho izakhamizi Taichung uhlale kaningi amaholide, kukhona nosaziwayo abaningi kokwenza kanye nezimakethe ezenziwe ngesandla ngesikhathi ngezimpelasonto, ngikholelwa awusoze ukhohlwe I-Taichung futhi ihlale.
4.90 · 246 okushiwo abanye
Bonisa zonke izibuyekezo ezingu-246
Kunesitolo sezinto ze-FamilyMart ezansi, futhi kunesuphamakethe phakathi kohambo lwemizuzu emi-5, imakethe ye-Shang, kanye ne-China-US Night Market, ngakho-ke awusoze walamba ebusuku.
Hamba imizuzu engu-15 ungene ku-Green Park Road futhi ungavakashela i-Audit Village, i-Qin Art Museum, i-Fantasy Cultural and Creative Park, kanye ne-National Art Museum endleleni.
Njalo ngezimpelasonto, kuzoba khona abathengisi bemisebenzi yezandla abakhethekile nabadlali basemgwaqweni abahlukahlukene ku-Luyuan Road. Isiko elihle liyaqhubeka nokondla le ngcebo, futhi ubuciko nokudala nakho kucebisa izimpilo zethu ngesikhathi esifanayo.
愛旅遊的胖子~希望在世界各地走走停停~最愛日本 泰國 東南亞各地 還有澳洲~
Hlola ezinye izinketho ezise- West District namaphethelo